विश्वकपमा सबभन्दा अनुभवी भारतीय टिम, उचाल्ला त विश्वकपको ट्रफी ?
२०७६ बैशाख १९ बिहीबार १७:४९:००
एजेन्सी । १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप जेठ १६ देखि ३१ गतेसम्म इंग्ल्यान्ड र वेल्समा संयुक्त रुपमा आयोजना हुँदैछ । सहभागी हुने दश टोलीले विश्वकपका लागि १५ सदस्यीय टोली घोषणा गरेर तयारी सुरू गरीसकेका छन् ।
सहभागी टोलीमध्ये दुई पटकको च्याम्पियन भारतले अनुभवी खेलाडीलाई समेट्दै टोली तयार पारेको छ । सफल खेलाडीको परिचय बनाएका विराट कोहलीको कप्तानीमा रहने भारतीय टोलीमा अधिंकाश खेलाडी अनुभवी छन् ।
चार युवा स्टार समेटिएको भारतीय टोलीमा महेन्द्रसिंह धोनी जस्ता अनुभवी सिनियर खेलाडी छन् । उनी ३ सय ४१ बढी एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मैदान उत्रेका छन् । उनको ब्याटिङ एभरेज ५० दशमलब ७२ छ । एकदिवसीय वरियतामा नम्बर १ मा रहेका खेलाडी बिराट टोलीका कप्तान छन् । २ सय २७ बढी खेलमा कोहली सहभागी भइसकेका छन् ।
वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका रोहित पनि टोलीका अनुभवी खेलाडी हुन् । उनले २ सय ६ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । समग्रमा विश्वकप खेल्ने १० टोलीमध्ये भारतीय टोलीमा अनुभवी खेलाडीको मिश्रण छ ।
यहाँ भारतीय १५ सदस्यीय टोलीबारे चर्चा गरिएको छ । यद्यपी भारतीय क्रिकेट बोर्डले एकसाता अघि टोली फेरबदल हुनसक्ने पनि बताएको छ ।
१. विराट कोहली ‘कप्तान’
दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय विश्वकप यात्रा सुरू गर्ने भारतीय टोलीका कप्तान हुन् विराट कोहली । एकदिवसीय वरियतामा शीर्षस्थानमा रहेका कोहली भारतीय टोलीका सफल खेलाडी हुन् ।
२००८ मा श्रीलंकाविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका कोहलीले २ सय २७ खेलमा १० हजार ८ सय २७ रन बनाइसकेका छन् । उनले ४१ शतक तथा ४९ अर्धशतक बनाएका छन् । उनको सर्वाधिक रन १ सय ८३ हो । भारतलाई विश्वकप फाइनलमा पुर्‍याउने रणनीतिमा रहेका ३० वर्षीय कोहली दायाँ हाते ब्याटसम्यान हुन् ।
२. महेन्द्रसिंह धोनी
विश्वकप खेल्ने भारतीय टोलीमा महेन्द्रसिंह धोनी सबभन्दा अनुभवी खेलाडी हुन् । एकदिवसीय विश्वकप करीअरको अन्तिम अवस्थामा रहेका धोनीले टोलीका लागि विश्वकप जिताउने सपना बोकेका छन् । ३७ वर्षीय धोनीले ३ सय ४१ एकदिवसीय खेलमा १० हजार ५ सय रन बनाएका छन् । १० शतक र ७१ अर्धशतक उनको एकदिवसीय करीअरमा छ । उनले २००४ मा बंगलादेशविरुद्ध एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा डेब्यू गरेका थिए । उनले अन्तिम एकदिवसीय खेल अष्ट्रेलियाविरुद्ध खेलेका हुन् ।
भारतीय टोलीमा अर्का अनुभवी खेलाडी हुन रोहित शर्मा । विश्वकपको १५ सदस्यीय टोलीमा रहेका रोहितले २ सय ६ एकदिवसीय खेलमा ८ हजार १० रन बनाएका छन् । विश्वकपमा नयाँ रणनितीमा रहेका ३० वर्षीय रोहितले २००७ मा आयरल्याण्डविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय खेलमा डेब्यू गरेका थिए । उनले एकदिवसीय करीअरमा २२ शतक र ४१ अर्धशतक बनाएका छन् । उनी मार्चमा घरेलु मैदानमा अष्ट्रेलियाविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजमा सहभागी भएका थिए ।
४. शिखर धवन
टोली सन्तुलित रहेको बताएका ओपनर शिखर धवन भारतीय टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । उनले हालै एक अन्तवार्तामा विश्पकपका लागि भारतीय १५ सदस्यीय टोली सन्तुलित रहेको बताएका थिए । ओपनर धवन एकदिवसीय क्रिकेटमा विराट र रोहितपछि फर्ममा छन। २०१० मा अष्ट्रेलियाविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय क्रिकेटको यात्रा सुरू गरेका उनले अहिलेसम्म १ सय २८ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । ५ हजार ३ सय ५५ रन बनाएका धवनले १७ शतक र २७ अर्धशतक बनाएका छन् ।
५. केएल राहुल
भारतीय टोलीमा समावेश युवास्टार हुन् केएल राहुल । २७ वर्षीय राहुलले १४ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । उनले २०१६ मा जिम्बाबेविरुद्ध खेलबाट एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । १४ खेलमा ३ सय ४१ रन बनाएका उनको नाममा १ शतक र ३ अर्धशतक मात्र छ । पछिल्लो समय उनी अष्ट्रेलियाविरुद्धको एकदिवसीय सिरिजमा पनि टोलीमा समावेश थिए ।
६. विजय शंकर
अम्बाती रायडुलाई स्थानान्तर गर्दै विश्वकप टोलीमा समावेश विजय शंकर टोलीका लागि कम अनुभव भएका खेलाडी हुन् । उनले अहिलेसम्म ९ एकदिवसीय खेलमात्र खेलेका छन् । तमिलनाडुमा जन्मिएका २८ वर्षीय विजयले यही वर्ष अष्ट्रेलियामा भएको एकदिवसीय सिरिजबाट डेब्यू गरेका थिए । उनले ९ खेलमा ५ इनिङसमात्र खेल्दै १ सय ६५ रन बनाएका छन् । पछिल्लो खेलमा उनले घरेलु मैदानमा भएको सिरिजमा अष्ट्रेलियाविरुद्ध नै खेलेका थिए ।
७. केदार जादभ
केदार जादभ भारतीय टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य हुन् । २०१४ मा श्रीलंकाविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय खेलमा डेब्यू गरेका केदारले ५९ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । उनले ११ सय ७४ रन बनाएका छन् । ३४ वर्षीय जादभको उच्च रन १ सय २० हो । उनले अहिलेसम्म २ शतक र पाँच अर्धशतक बनाएका छन् । उनले पछिल्लो एकदिवसीय खेलमा अष्ट्रेलियाको सामना गरेका थिए ।
८. दिनेश कात्तिक
युवा स्टार रिसब पन्तको स्थानमा १५ सदस्यीय टोलीमा समावेश दिनेश कात्तिक टोलीका अनुभवी खेलाडी हुन् । ३३ वर्षीय दिनेशले २००४ मा इंग्ल्यान्डविरुद्ध खेल्दै एकदिवसीय क्रिकेट सुरु गरेयता ९१ खेलमा सहभागिता जनाएका छन् । १७ सय ३८ रन बनाएका कात्तिक ९ अर्धशतक बनाएका छन् । यस वर्ष न्यूजिल्याण्डविरुद्ध खेले यता कात्तिकले एकदिवसीय खेलमा स्थान बनाएकका थिएनन् । उनी युवास्टार रिसबको स्थानमा टोलीमा अटाएका हुन् ।
९. युजवेन्द्र चाहल
विश्वकपका लागि भारतीय टोलीमा रहेका लेगस्पिनर युजवेन्द्र चाहल टोलीका मुख्य बलर हुन् । उनले अहिलेसम्म ४१ एकदिवसीय क्रिकेटमा बलिङ गर्दै ७२ विकेट लिएका छन् । २८ वर्षीय युजवेन्द्रले २०१६ मा जिम्बाबेविरुद्धको खेलमा एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्यु गरेका थिए । हालै अष्ट्रेलियाविरुद्ध एकदिवसीय सिरिज खेलेका उनी टोलीका आशालाग्दा बलर हुन।
१०. कुलदीप यादव
कुलदीप भारतीय टोलीमा समावेश खेलाडीमध्ये युवा बलर हुन् । २४ वर्षीय कुलदीपसँग ४४ एकदिवसीय खेलको अनुभव छ । उनले अहिलेसम्म ८७ विकेट लिइसकेका छन् । २०१७ मा वेष्ट इन्डिजसँगको खेलबाट उनी एकदिवसीय क्रिकेटमा भित्रिएका हुन् ।
११. भुवनेश्वर कुमार
२९ वर्षीय बलर भुवनेश्वर कुमार भारतीय टोलीका अनुभवी खेलाडी हुन् । २०१२ मा राष्ट्रिय टोलीका एकदिवसीय क्रिकेटमा उदाएका कुमारले १ सय ५ खेलमा १ सय १८ विकेट लिएका छन् । यस्तै ५ सय ५३ रन बनाएका छन् । उनले हालै अष्ट्रेलियाविरुद्धको सिरिज खेलेका थिए ।
१२. जसप्रित ब्रुमराह
२५ वर्षीय युवा बलर भारतको विश्वकप यात्रामा नायक बन्न सक्ने खेलाडी हुन् । ४९ एकदिवसीय खेलको अनुभव लिएका उनी सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीमध्ये एक हुन् । जसप्रितले २०१६ मा डेब्यू गरेयता अहिलेसम्म ४९ खेलमा ८५ विकेट लिएका छन् ।
१३. हार्दिक पाण्डेय
भारतीय टोलीका २५ वर्षीय अलराउण्डर हार्दिक पाण्डेय टोलीका युवा स्टार हुन् । ४५ एकदिवसीय खेलमा ७ सय ३१ रन बनाएका पाण्डेयका नाममा ४ अर्धशतक मात्र छ । बलिङमा उत्तिकै प्रदर्शन गर्ने उनले ४४ विकेट आफनो नाममा लेखाएका छन् । उनले २०१६ मा न्युजिल्याण्डविरुद्ध एकदिवसीय खेलमा डेब्यू गरेका थिए ।
१४. रविन्द्र जडेजा
भारतीय टोलीका लागि अनुभवी अलराउण्डर खेलाडी हुन् रविन्द्र जडेजा । ३० वर्षीय जडेजाले १ सय ५१ एकदिवसीय खेलमा २ हजार ३५ रन बनाएका छन् । १० अर्धशतक प्रहार गरेका जडेजाले २००९ मा एकदिवसीय क्रिकेटमा डेब्यू गरेका थिए । श्रीलंकासँग डेब्यू गरेका उनले बलिङमा आफूलाई प्रमाणित गरेका छन् । उनले १ सय ५१ एकदिवसीय खेलमा १ सय ७४ विकेट लिएका छन् ।
१५. मोहमद शमी
तीव्र गतिका बलर मोहमद शमीले पनि विश्वकपको १५ सदस्यीय टोलीमा स्थान बनाएका छन् । २८ वर्षीय शमीले २०१३ मा डेब्यू गरेयता ६३ एकदिवसीय खेलमा १ सय १३ विकेट लिएका छन् । पाकिस्तानविरुद्धको खेलबाट एकदिवसीय क्रिकेट सुरू गरेका शमीले पछिल्लो समय मार्चमा दिल्लीस्थित फिरोज कोट्ला रंगशालामा अष्टेलियाविरुद्धको एकदिवसीय सिरिज खेलेका थिए ।